Kompitaroonni boruu waan kiisa kaayatan ta'uuf deema jedhama - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Kompitaroonni boruu waan kiisa kaayatan ta’uuf deema jedhama
Kompitaroonni boruu waan kiisa kaayatan ta’uuf deema jedhama
Teeknolojiin hangam akka dafee jijjiiramaaru waan hundi quba qabu. Namoonni akka dhuunfaattis ta’ee gareen hojjachuun yeroodhaa yerotti waan gama teeknolojiin addunyaa funduratti tankaarfachiisu irratti bobba’aniiru- boqonnaan maletti jechuun nidanda’ama. Gama saayinsiifi teeknolojiitiin nugahe, kunumti gahaadha wonti jedhu hinjiru. Yeroo hunda waan haarawa uumuufi isa uumame daran fooyyessuuf tattaafii saahuu godhamuudhan saaninisiifi teeknolojii adda kan godhu.
Wontoota teeknolojiin uumee hundi keenya itti fayyadamaa taane keessa inni tokko kompiitara. Kompiitarri amma jiru eessaa eegale bakka amma itti arginu kana akka gaye hedduun namootaa hubatu jedheen abdadha. Woggoota 40 dabran keessatti kompiitaroonni bal’ina, ulfina, saffisaanis ta’ee abshaalummaan jijjiirama kana hinjedhamne agarsiisan. Nuu mitii worri jalqaba kompiitara uuman hedduun isaanii kompiitara ni uuman malee meeshaan kuni mana hunda niseena, jireenya namoota hammana gahuu geeddara, ammas bifa har’a qabu [pads, smartphones] kana qabaata jedhanii hinyaanne. Jijjiiramni mul’ate nuqofa osoo hintaane isaanumaa niraaje jechuudha.
Hujiin kompiitara daran fooyyessuu ammas oo’ee itti fufuu isaati kan odeeffannon dhaabbilee addaddaa irraa bahan argisiisan. Ragaan tokko yaada haarawa [concept] DELL Computers qabatee gadi baye. Akka yaada Dell kanatti kompiitarri gara funduraatti waan kiisa kaayatan ykn harkatti hidhatan ta’a. Yaada dansaa mitii? Yaanni jiraannaan wonti gara hujiitti hingeeddaramne hinjiru. Suurota kanniin ilaaluudhaan fundurri kompiitaraa garamitti akka ta’e isinumti tilmaamaa.
Akkuma suurota irraa argitan kiiboordiifi moniitariin waan ijaan argan malee waan harkaan tuqanii miti. Kiiboordiifi moniitaras ifnana kompitara boruu keessaa maddutu uumu. Wonti akka isaan har’aa harkaan tuqan tokko hinjiru. Qubeen kiiboordii hundi waan ifnanaan uumame. Barreessuuf isuma tuquudha. Gara funduraattii kiiboordii rukutuun sagaleen woljeequun, keessattuu waajjiroota keessatti, hafuuf deema jechuudha. Nuhaa’argisiisu.
Previous articleLammiiwwan Itoophiyaa lama Aafrikaa Kibbaa keessatti ajjeefaman
Next articleAngawoonni Afrikaa Bill Clinton faarse ganna 20 booda sirna abbaa-irree diriirsanii argaman jedhame